Ipulatifomu Yezinsizakalo Zokuqukethwe ze-GRM: Ukuletha Ubuhlakani Kuzinqubo Zebhizinisi Lakho | Martech Zone
Amapulatifomu we-Enterprise Content Management (ECM) aqhubeka nokuqhubekisela phambili okunikezwayo, hhayi nje ukuthi abe amakhosombe amadokhumenti, kepha empeleni ahlinzeke ngobuhlakani bezinqubo zebhizinisi. Ipulatifomu Yezinsizakalo Zokuqukethwe ze-GRM (CSP) ingaphezulu kakhulu kohlelo lokuphathwa kwemibhalo. Kuyisixazululo lapho kungenziwa khona imibhalo okwabelwana ngayo bese ukuqhutshwa komsebenzi kwebhizinisi kungenziwa ngcono. I-CSP ye-GRM ivumela i- uhlelo lokuphatha okuqukethwe (CMS) ukuhlanganisa izibalo zedatha, ukufunda ngomshini, ukuthwebula idatha okuhlakaniphile, nesoftware ye-DMS ukuphatha amadokhumenti, ukulandelela inguqulo, izici zokuphepha zobuchwepheshe obuphezulu, enembile ukuphathwa kwenqubo yebhizinisi (BPM) kanye I-Software Management Management (WMS).
Lokho kunama-acronyms wezinhlamvu ezi-3!
Izici zePlatform Yezinsizakalo Zokuqukethwe ze-GRM zifaka:
Izinqubo ezizenzakalelayo nezisakazwayo - Imisebenzi yebhizinisi yansuku zonke efana nokuthengwa kwe-oda noma ukucubungulwa kwezimangalo kuvame ukubhalwa ngesandla, kuthambekele ekubambezelweni nasemaphutheni, futhi kuvame ukudala izinkinga ezinkulu lapho kudilizwa. Ngezinsizakalo zokuqukethwe ze-GRM, ungazenzekela kalula futhi uqondise izinqubo ezinjalo. I-CSP yethu ilandelela yonke imisebenzi yabasebenzisi kanye nokubuyekezwa kwamadokhumenti njengoba kuhlangatshezwana nabo ngesikhathi sangempela, futhi kuthuthukisa ukuqhubekela phambili ekufinyeleleni imisebenzi ebalulekile.
Uhlelo Lokulawulwa Kokuqukethwe Kwamabhizinisi - ipulatifomu yabo yezinsizakalo zokuqukethwe uhlelo lokulawulwa kwamabhizinisi oluqhutshwa yi-AI olususa futhi lucubungule idatha engahlelekile, noma kusuka ezinhlelweni zamafa, futhi kuthuthukise izinqubo zebhizinisi. Sesidlule emasigineni kagesi. I-CSP eyenzelwe ukwenziwa okuqhubekayo kwezinqubo zebhizinisi nokufinyelela ekuhambeni, noma kumadivayisi eselula.
Umbhalo Wokuphila Ukuphathwa - I-GRM inikeza yonke insiza yezinsizakalo zokuphathwa kwamadokhumenti ezingahambisa futhi ziguqule amafayela wephepha abe yimibhalo edijithali, kukhishwe idatha, kuhlukaniswe amarekhodi, futhi kuwenze alungele ukubambisana kuzinqubo zebhizinisi lenkampani yakho. Okuvame ukuthatha amahora manje sekufeziwe ngemizuzwana. Ngenkathi usuvele ulawula izinqubo zokuhamba komsebenzi, qiniseka ukuthi wonke amarekhodi akho alondolozwe ngokuphepha endaweni yethu yokugcina amafu noma ezindaweni zabo zokugcina amaphepha ezingafinyeleleki, ezifinyeleleka noma nini lapho uzidinga.
Ukuqina kwe-GRM, kusekelwe efwini ipulatifomu yezinsizakalo zokuqukethwe (I-CSP) uhlelo oluguquguqukayo nolusabekayo oluqukethe iqoqo lamathuluzi namakhono okusiza amabhizinisi ukulawula idatha yawo - ukuyihlela nokuyisebenzisa kahle nangempumelelo. Phakathi kwalawo makghono yi-Actionable Analytics, isibikezelo sezibalo ezihlinzeka ngemininingwane yesikhathi sangempela ukuze abasebenzisi bakwazi ukukhomba ngokushesha izingqinamba namathuba, futhi baziphathe ngokufanele.
I-GRM Management Management ingumhlinzeki oholayo wezinhlelo zokuphathwa kolwazi. Ipulatifomu yezinsizakalo zokuqukethwe ezinamandla ezisuselwa emafini ze-GRM zisebenza njengesisekelo sezisombululo zedijithali i-GRM enikeza amaklayenti ayo. Inikezela ngezizinda ezahlukahlukene zezimboni ezinjengokunakekelwa kwezempilo, uhulumeni, ezomthetho, ezezimali kanye nezabasebenzi, i-GRM ihlinzeka ngamakhasimende ayo izinsiza ezifana nokuguqulwa kwedijithali, izixazululo zokubamba idatha ezithuthukile, amasistimu wokuphatha amadokhumende, ukuzenzakalela kokuhamba komsebenzi, ukugcina umlando kwedatha, ukuhambisana nokubusa, ibhizinisi ukuphathwa kwenqubo namakhono we-analytics athuthukile, kanye nohlu oluphelele lokugcinwa kwemibhalo, ukuskena kanye nezinsizakalo zokuphathwa kwamarekhodi.
Tags: izinqubo zebhizinisiisitoreji sedokhumenti yamafuCMSIpulatifomu Yezinsizakalo Zokuqukethwecspanalytics yedathaisoftware management softwaredmsisitoreji sedokhumentiECMUkuphathwa kokuqukethwe kwebhizinisigrmukuthwebula idatha ehlakaniphileukufunda imishiniumbhalo wephephaukulandelela inguquloizinqubo zokuhamba komsebenzi